Ikhaya / Blog / Iintsapho zamaTshayina, ngenene azikufanelanga ukwahlukana okwesithathu?
2020 / 10 / 17 uhleloBlog 1007 0
Nanini na xa ndithetha ngeJapan nabahlobo bam, andinakususa isihloko esinye: izindlu zangasese.
Izindlu zangasese zaseJapan, ezoluntu nezasekhaya, zinomtsalane ongachazekiyo, njengoko umhlobo wam watsho, “Ndiziva ndibhetele xa ndisebenzisa indlu yangasese eJapan.
Nangona kunjalo, eyona nto indichukumisa kakhulu ngezindlu zangasese zaseJapan ayiyilo loyilo olucocekileyo nolucocekileyo, kodwa indlela ezisetyenziswa ngayo izindlu zangasese.
Abantu baseJapan bathanda ukuhlamba, kungakhathalekile ukuba igumbi lokuhlambela likhulu okanye lincinci kangakanani, ibhafu ibhabha kumakhaya onke.
Sikwazisile ukwahlula kathathu ngaphambili, kwaye isizathu sokuba siphinde sikhankanye ukwahlula kathathu kwakhona namhlanje kungenxa yokuba sifumanise ukuba baninzi abantu abangaqondiyo yintoni ezahlulayo zintathu, kwaye zilandela nje imeko ngenxa yokwahlula kathathu, ngaphandle kokujonga ngononophelo ukuba yile nto bayifunayo okanye hayi.
Ke namhlanje siza kuncokola kakuhle yintoni kanye ukwahlukana okuthathu, nokuba kuyafuneka okanye hayi ukwahlukana abathathu.
Yintoni ngokuchanekileyo Ukwahlula okuThathu?
Okokuqala, kufuneka sicacise umxholo wokwahlula kathathu, oko akuthethi ukongeza umnyango weglasi okanye ikhethini leshawa kwigumbi lokuhlambela nokuba lahluliwe.
Oku ayizokwahlulwa kathathu, kodwa “ukwahlukana okumanzi nokomileyo.”
Ukwahlula kathathu kokwenyani kuthetha ukuba igumbi lokuhlambela, indlu yangasese kunye nezahlulo azidluli kwindawo yomnye kwaye zinokusetyenziswa ngabantu abathathu ngaxeshanye. Ngamanye amagama, ukwahlula kathathu ngamagumbi amathathu azimeleyo, aya kwabelana ngomsebenzi wokuhlambela omnye komnye, ozimeleyo ngaphandle kophazamiseko.
Ukwahlula okwesibini yeyona nto ilungileyo, indlu yangasese yahlulwe yangamacandelo amabini azimeleyo, abantu ababini basebenzisa igumbi lokuhlambela ngaxeshanye.
Kwaye eyona nto ilandelayo ilandelayo kukufezekisa "ukwahlula okumanzi nokomileyo", ishawa emanzi ephuma ngokuzimeleyo, kwigumbi lokuhlambela ukuze wenze isahlulelo emgceni, ukuze ukwazi ukunqanda indawo yonke yokuhlambela yenziwe imanzi.
Xa kuthelekiswa negumbi lokuhlambela elidityanisiweyo, ukwahlula okubini kunye nokuzahlula kathathu Unokuphumeza ukwahlula okumanzi nokomileyo, okunyusa kakhulu intuthuzelo yokusebenzisa igumbi lokuhlambela.
Xa kuthelekiswa nokwahlukana okubini, ishawa yokwahlula kathathu izimele ngokupheleleyo, ukwahlulwa kokumanzi nokomileyo ukufezekisa ngokucokisekileyo, kwaye kwangaxeshanye kunokulukhulula usapho kusetyenziso lokuchasana noxinzelelo, kuphucula kakhulu ukusebenza ngokusetyenziswa kwegumbi lokuhlambela.
Khawufane ucinge ngentsapho enabantu abathathu. Ebusuku, ngelixa umama ehlamba, utata angaya kwindlu yangasese kwaye abantwana banokuhlamba ngaxeshanye. Ukuba inani labantu likhulu, linezizukulwana ezithathu kwindlu enye, izibonelelo zokwahlula kathathu ziyabonakala.
Ngaba le yeyona nto iluncedo ngokwahlukana kwesizukulwana esithathu?
Hayi, akunjalo, kwaye ukuphuma komxholo kuyathandeka. Izibonelelo zokwahlula kathathu zininzi (kungenjalo azizukuthandwa), kodwa njengokungenisa elizweni, banokungxengxisiswa.
Eyona ngongoma ibalulekileyo yile ayisiyomfuneko nje yazo zonke iintsapho zamaTshayina.
Esinye sezizathu zokuba iintsapho zaseJapan zifuna ukwahlula ezi zintathu kukuba kwingqondo yazo, ukuhlamba nokuya kwindlu yangasese akuvumelekanga ukuba babe kunye, enye yindawo "yokucoceka" kwaye enye yindawo "yelindle" .
Ayamkelekanga ngokwasemphefumlweni kubo ukuba igumbi lokuhlambela lahlukile, kodwa akukho nzima kuthi ukuba samkele.
Emva kwayo yonke loo nto, eyona nto idumileyo esasinayo sisiqwenga esinye
Ke ngoko, imeko yethu yokwahlula kathathu kufuneka mayingathathelwa ngqalelo ngokwembono yengqondo, kodwa kwindlela ebonakalayo.
Ikhaya elifuna ukwahlulwa kathathu, okokuqala abemi beli khaya kufuneka babe ubuncinci aba-3 okanye nangaphezulu, kungenjalo akukho mfuneko.
Okwesibini, ikhaya linayo kwaye linendawo yokuhlambela enye kuphela. Ukuba usapho lunamagumbi okuhlambela amabini, okoko zombini zinokwenza ngokwahlukeneyo, zinokukwazi ukuhlangabezana nokusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Into yokugqibela ekufuneka uyiqwalasele kukuba ingaba amalungu osapho aqhelile ukuhlamba. Ibhafu iya kuthatha ixesha elide kuneshawa, kwaye ibhafu isendaweni enokusetyenziswa ngumntu omnye kuphela. Ke ngoko, kubalulekile ukwahlula ibhafu kusapho olukhulu ukuthatha ibhafu yokuphumla, yiyo loo nto abantu baseJapan bethanda ukuhlamba.
Ukongeza kwinto yokuba ukwenziwa kwezinto kwahlukile kusapho olunye ukuya kolunye, kukho obunye ubunzima kwiintsapho zamaTshayina: Kunzima ukuqonda ukwahlula kathathu.
Isizathu kukuba ubungakanani kunye nokumila kwendlu kufuna kakhulu.
Ukuze ufezekise ukwahlula kathathu, igumbi lokuhlambela akufuneki libe lincinci kakhulu, kwaye iimfuno zobungakanani bendlu ziphezulu nangaphezulu.
Iimilo eziqhelekileyo zezindlu zokuhlambela zezi: i-strip ethe nkqo, umgca othe tyaba kunye nesikwere.
Igumbi lokuhlambela elide elithe tyaba kuphela elinokuthi lifezekise ukwahlula kathathu, isithuba sahlulwe ngcono, yongeza nje ukwahlulahlula.
The sikwere igumbi lokuhlambela, kwelinye icala, liya kufuna indawo eyi-4.6 yeemitha zesikwere, Ngokwengqikelelo kaNks. Walkie.
Umthombo: isikhongozeli sekhaya loluntu
Ukuba ufuna ukuyisebenzisa kakuhle, indawo leyo kufanele ukuba zi-6 square metres.
Uhlobo oluqhelekileyo kathathu lokwahlula isikwere
Ngokubanzi kwendlu yangasese encinci …… ayinakufaneka ikwazi ukuphumeza oku, kuba ukuze ufike kweyona ndawo ishushu yangaphakathi, umntu kuya kufuneka adlule kwindlu yangasese (umgca onamandla kuya kufuneka ube ③ → ② → ①). Ukuba oku kunokufezekiswa, udonga luya kufuna ukususwa.
Ukwahlula kathathu okanye ukwahlula-kubini
Okucacileyo kukuba isiqwenga esinye kufuneka, ke ukhetho esijamelene nalo sinalo ingaba uzahlula kathathu okanye ukwahlula kabini.
Ngoku indlela yokwahlula kathathu kwigumbi lokuhlambela ishushu kakhulu, kwaye mna ngokwam ndingummeli wokwahlukana okuthathu, kuba zombini intuthuzelo kunye nokusebenza kakuhle kunezibonelelo zazo ezicacileyo.
Kodwa i-orenji izalwe eHuainan iorenji, izalelwe eHuabei yiHovenia, ekugqibeleni nokuba izahlulo ezintathu, okanye ukubona ukuba ayinakugqiba ekugqibeleni ngokweemeko zendawo, kwaye ngokwenene ukuphucula ulonwabo lwabo index yokuphila.
Umzekelo, kutsha nje, umntu osebenza naye oxakeke kukuhombisa ufumene imizobo emibini yoyilo, uyilo lwendlu yangasese lufana ncam kwaye lahlukene kathathu ngokwahlukeneyo.
Makhe sijonge ukwahlula kathathu kuqala:
Isicwangciso sokuyilwa kathathu
Uyilo lokwahlula kathathu lukwicala lesikwere, kodwa igumbi lokuhlambela lasekuqaleni alikho ngaphantsi, ke kuya kufuneka uboleke isithuba kwigumbi elikufutshane.
Inkqubo yoyilo lokwahlula-hlula
Uyilo olwahlulwe-mabini lolona hlobo luqhelekileyo, isinki iyazimela yodwa. Eziyilo zimbini azilunganga kwaphela okanye azilunganga, kwaye zombini zilungile ngokusetyenziswa kwendawo.
Nangona kunjalo, ugxa wam ekugqibeleni wakhetha ukwahlukana okwesibini kuba wayecebe ukwenza igumbi elikufutshane negumbi lokuhlambela libe sifundo kwaye wayengafuni nokuyikhuphela indawo yokufunda kwigumbi lokuhlambela. Kwaye le ndlu ihlala ingumntu ohlala yedwa, akukho mfuneko yokuba enze ukwahlukana kathathu.
Ukwahlula-hlulwa ngeendlela ezintathu kunezibonelelo zalo kwaye kulunge ngakumbi kunokwahlula-hlula ngeendlela ezimbini kusapho olukhulu. Nangona kunjalo, ukwahlulwa kwesibini kufuna indawo encinci kwaye kufanelekile kwiintsapho ezincinci.
Ukhetho phakathi kokwahlulwa kathathu okanye ukwahlulwa kabini kufuneka kusekelwe kwiimfuno zakho ezibonakalayo, endaweni yokulandela into ekuthiwa yifashoni.
Umhlobo owayefunda eJapan warenta iflethi enezikwere ezingama-38 eyedwa, enegumbi lokuhlambela elide elahlulwe kathathu, isinki embindini, ishawa + ibhafu ngasekhohlo, nendlu yangasese ngasekunene.
Kuba zontathu ezi ndawo zixinene kakhulu, uhlala evula umnyango wendlu yangasese aze ayidibanise nesinki, ejika ibe yinxalenye yesibini.
Nangona kunjalo, esinye isihlobo esisandula ukungena kwindlu entsha kutsha nje, njengentsapho yabantu abahlanu, sibonise umyili ngaphambi kohlaziyo ukuba ufuna igumbi lokuhlambela elahlulwe kathathu.
Nangona kunjalo, indawo yangasese yoqobo yayizi-4mitha zesikwere, ke ndiboleke i-2 square metres kwigumbi lokulala elikufutshane ukwandisa indawo yangasese.
Xa umamazala ehlamba umntwana wakhe kwigumbi lokuhlambela ebusuku, umyeni wam uya kwigumbi lokuhlambela, kwaye mna ndingalala kanye emva kokuhlamba, ngoko ke akufuneki ndilinde omnye nomnye. Nangona igumbi lokulala liye lincinci elincinci, andizisoli nakanye.
Ngale mizekelo mibini, kukubonisa ukuba impendulo echanekileyo okanye engalunganga kuyo Ukukhetha ukwahlula kathathu okanye ukwahlula kabini kwaziwa nguwe kuphela.
Nangona sihlala sijamelene nokukhetha okuninzi kwaye kufuneka senze urhwebo oluninzi kwinkqubo yokuhombisa amakhaya ethu, okoko nje sicinga ngemikhwa yethu kwaye sizibuze ukuba siyayidinga nyani na, ukuba siqala ezona mfuno, nokuba asikwazi ukulandela ukugqibelela, ubuncinci asinakuzisola.
Imifanekiso ngoncedo lwepinterest
Ngaphambili :: Ezona ngcebiso ziBalaseleyo kwigumbi lokuhlambela, Zonke zikwindawo enye! next: Ifayiphu evuzayo? Umhlwa? Ngaba amanzi acotha? Izandla malunga nendlela yokuLungisa